बच्चाहरूलाई सहयोग | Nepali Children
शुरुदेखि नै नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशनले बच्चाहरूलाई उनीहरूको शिक्षाको लागि काम गर्यौ। हामी यी बच्चाहरूलाई समर्थन गर्न "स्कूलका अभिभावकहरू" को व्यवस्था गर्दछौं। यी अभिभावकहरूले स्कूल शुल्क, स्कुल र्डेस ,जुत्ता र स्टेशनरी जस्ता शिक्षा मा आवश्यक हुने सामार्गीमा योगदान गर्छन्। नेपाली चिल्ड्रेन फाउन्डेसनले बच्चाहरूलाई २ स्तरसम्म समर्थन गर्दछ। साँच्चिकै प्रतिभाशाली र आर्थिक सहयोगको आवश्यक पर्ने बच्चाहरूलाई समर्थन गर्दछ। हामीले बच्चाको अवस्था जाँच गरेपछि र बच्चाहरूको बाबुआमासँग उनीहरूको अवस्था र प्रेरणाको बारेमा धेरै पटक कुरा गरिसकेपछि, यस विशेष बच्चालाई सहयोग गर्दछौ। यस सहायताले नेपाली बाल फाउंडेशनले आशा गर्दछ कि यी बच्चाहरूले स्कूल छोड्दैनन्, बाल श्रम गर्न बाध्य बनाईने छैन र कुनै पनि अप्ठ्यारोमा पर्नेछैन्न ।हामीले थाहा पायौ बच्चाहरू धेरै गर्व गर्छन् की उनीहरूलाई र्पायोजन छ।उनीहरू A+ लेवल ल्याउन र कक्षागत परीक्षामा र्पतिसपर्दा गर्न थाल्छन् ।
बच्चाहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने ?
फेसबुक (Jolu Arati) वा ईमेल द्वारा (jolanda@nepalichildren.com) तपाईं जोलान्दालाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईं बच्चाहरूलाई आफ्नो मद्दत घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशनले तपाईका लागि बच्चा चयन गर्दछ। धेरै जसो नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशनले स्कुल फी, स्कुल्ड्रेस र स्टेसनरी तिर्ने गर्दछ। एक बच्चा सहयोग को लागि लागत प्रति वर्ष रू २२,०००/- छ। हाम्रो प्रशासनमा हामी यो पैसा तपाईंको बच्चाको लागि मात्र खर्च गर्नेछौं। जब अधिक लागतहरू गरिन्छ, यो आमा बुबाको जिम्मेवारी हुनेछ। यदि कम खर्चहरू गरियो भने, पैसा अर्को स्कूल वर्षको लागि सुरक्षित गरिनेछ। त्यसोभए तपाईंको भुक्तान गरिएको पैसा केवल तपाईंले चुनेको बच्चाको लागि खर्च गरिनेछ। नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशनको बैंक खाता हो: NL 22 TRIO 0390 9111 94 Stiching Nepali Childern, Swift Code TRIONL2U ।
तपाईंलाई कसरी थाहा पाउनु हुन्छ तपाईंको पैसा राम्रोसँग खर्च हुनेछ?
नेपाली चिल्ड्रेन फाउंडेशनले पैसा नियन्त्रण गर्नेछ:
हामीले सिध्दै पैसा कसैलाई पनि दिँदैनौ ,बिना र्पमाण।
स्कूलको नतीजा जाँच गर्न र बच्चाको निजी अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन स्कूलसँग हार्मो एउटा सम्झौता छ।
स्कूलमा एक व्यक्तिले सबै जानकारी प्रदान गर्दछन्। साथै भुक्तानको बारेमा कुनै पनि प्रश्न अब अभिभावकलाई सोधिनेछैन। त्यसैले तिनीहरूलाई कम तनाव हुनेछ।
तपाइँ कति लामो समय सम्म बच्चाको सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाइँको सहयोग बच्चाको शिक्षा को लागी वार्षिक भुक्तानी हुनेछ। नेपाली चिल्ड्रेन फाउन्डेशन आशा गर्दछ कि तपाईले लामो अवधिको लागि गर्नुहुनेछ। तर यदि तपाईं आफ्नो समर्थन छोड्ने चाहानुहुन्छ भने नेपाली चिल्ड्रेन फाउन्डेशनले तपाईंको बच्चाको आर्थिक सहयोग जारी राख्नेछ र सकेसम्म चाँडो नयाँ सहयोग फेला पार्ने कोशिश गर्नेछ कि सहयोग रोकिनेछ। कृपया, यदि तपाइँ एक बच्चा सहयोग गर्न शुरू गर्नुहुन्छ, यो पूरा स्कूलको जीवनको लागि गर्नुहोस्। अभिभावक वा बच्चाहरूलाई निराश नगर्नुहोस् र उनीहरूको स्कूल क्यारियरमा १२ वर्ष लाग्छ भन्ने महसुस गर्नुहोस्।
हामी तपाईंलाई कसरी सूचित गर्छौं?
नेपाली बाल फाउंडेशनले महसुस गर्दछ कि तपाइँ तपाइँको प्रायोजक बच्चाको बारेमा तपाइँलाई सूचित गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारण
तपाईलाई फेसबुक समूह नेपाली बच्चाहरूको साथ समायोजन गर्न सम्भव छ।
नेपाली बाल फाउंडेशनले तपाईंलाई पैसा खर्च कसरी गर्ने चलानी देखाउँदछ।
नेपाली चिल्ड्रेन फाउन्डेशनले नियमित ई-मेल प्रति समाचार पत्र पठाउँछ।